Nepali Christian Bible Study Resources - हितोपदेश, उपदेशक र श्रेष्ठगीत
» अध्ययन मालाहरू » पुरानो नियमका पुस्तकहरू » ८-हितोपदेश, उपदेशक र श्रेष्ठगीत
हितोपदेश, उपदेशक र श्रेष्ठगीत
पुरानो नियमको सर्वेक्षण गर्ने क्रममा हामी यस अध्यायमा अरु तीन पद्य पुस्तकहरूको अध्ययन गर्नेछौं: हितोपदेश, उपदेशक र श्रेष्ठगीत। यी तीनओटै पुस्तक एकैजनाले लेखेका हुन्। तिनी को थिए? (प्रत्येक पुस्तकको पहिलो पदलाई पढेर पत्ता लगाउनुहोस्): __________________________________
यी तीन पुस्तकहरूलाई राम्ररी बुझ्न तिनका लेखकका बारेमा केही कुराहरू बुझ्नु आवश्यक छ।
लेखक राजा सोलोमन
सोलोमनका बाबु को थिए (१ राजा २:१-३)? _______________। दाऊद कस्ता राजा थिए (१ राजा १५:३,५)? _______________________________________। सोलोमनका बाबु परमेश्‍वरको भय मान्ने व्यक्ति थिए जसले प्रभुको सेवा राम्ररी गरे। आफ्नो वृद्धावस्थामा दाऊदले आफ्नो छोरा सोलोमनलाई केही महत्त्वपूर्ण सल्लाहहरू दिए (हेर्नू: १ इतिहास २८:९)। दाऊदले सोलोमनलाई तीनओटा अर्ती दिए:
परमेश्‍वरको सेवा गर
परमेश्‍वरलाई खोज (र उहाँलाई नत्याग)
के सोलोमनले आफ्ना बाबुको सल्लाहलाई माने त?
दाऊदको मृत्युपछि सोलोमन इस्राएलमा राजा भए। बाइबलले १ राजा ३:३ मा बताएको कुन कुराले प्रारम्भिक चरणमा सोलोमन राम्ररी नै अगाडि बढ्दै थिए भन्ने कुरा देखाउँछ? ________________ ______________________________। १ राजा ३:५ मा परमेश्‍वरले सोलोमनसित एउटा अचम्मको कुरा गर्नुभयो। उहाँले यसो भन्नुभए बराबर थियो, “सोलोमन, तिमी माग, म दिनेछु। तिमी के माग्छौ? जे चाहन्छौ माग!” यदि तपाईंलाई परमेश्‍वरले त्यसो भन्नुभएको भए तपाईं के माग्नुहुन्थ्यो? पैसा? लामो आयु? थुप्रै साथीहरू? सुःख? ख्याती? सम्पत्ति? सोलोमनले के मागे (१ राजा ३:९-१२)? _________________________________________। के परमेश्‍वरले उनको माग पूरा गरिदिनुभयो (१ राजा ३:१२)? ____________। परमेश्‍वरले उनलाई थप के कुरा पनि दिनुभयो (१ राजा ३:१२)? _________________________________
सोलोमनको बुद्धिको नमुनाको एक झलक १ राजा ३:१६-२८ मा उल्लेखित घटनामा देख्‍न सक्छौं। तपाईं सोलोमनको स्थानमा हुनुभएको भए त्यसबेलाको समस्या समाधान गर्न के तपाईंले पनि त्यही उपाय निकाल्नुहुनेथ्यो होला? के प्रभु येशूले मत्ती १२:४२ मा सोलोमनको बुद्धिको चर्चा गर्नुभएको थियो? _________। के सोलोमनले आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर ज्यादै कठीन प्रश्‍नहरूको जवाफ दिन सके (१ राजा १०:१-३)? ______
यस अध्यायमा हामी सोलोमनले लेखेका पुस्तकहरूको विचार गर्नेछौं। स्मरण होस्, यी पुस्तकका लेखक परमेश्‍वरबाट धेरै बुद्धि प्राप्त गरेका व्यक्ति थिए। जसरी परमेश्‍वरले पावललाई नयाँ नियमका तेह्रओटा जति पुस्तकहरू लेख्‍नलाई धेरै बुद्धि दिनुभयो त्यसरी नै उहाँले सोलोमनलाई पुरानो नियमको तीनओटा पुस्तकहरू लेख्‍नलाई धेरै बुद्धि दिनुभयो।
सोलोनमको हृदयमा भएको पाप-स्वभाव परमेश्‍वर राम्ररी जान्नुहुन्थ्यो त्यसैले उहाँले सोलोमनलाई १ राजा ९:६-९ मा एउटा कडा चेताउनी दिनुभएको थियो। परमेश्‍वरले सोलोमनलाई कुन कुरा नगर्नू भन्ने आज्ञा दिनुभएको थियो (१ राजा ९:६)? ______________________________________________ _________________________________________________। के सोलोमनले त्यस चेताउनीलाई माने होलान्?
आफ्नो जीवनको अन्तमा सोलोमनले एउटा बुद्धिपूर्ण सत्यता व्यक्त गरेको पाउँछौं: “संसारमा यस्तो कुनै धर्मी मानिस _______, जसले सबै काम _______ गर्छ र कहिल्यै _______ गर्दैन (उपदेशक ७:२०)।” यसले सोलोमनलाई पनि समेट्दछ। उनी पनि पापमा लोटेका थिए र उनको लोटाइ ठूलो थियो! सोलोमनको अधोगतिको बारेमा हामी १ राजा ११ मा पढ्छौं। सोलोमनको गिरावट उनी जवान हुँदा भएको थियो कि वृद्ध हुँदा (१ राजा ११:४)? __________________। के उनले प्रभुलाई आफ्ना बाबु दाऊलेजस्तै पछ्याए (१ राजा ११:६)? _______________। के सोलोमन प्रभुको आज्ञाकारी भए (१ राजा ११:१०)? ______________। सोलोमनको पापको बारेमा नहेम्याह १३:२६ मा पढ्न सकिन्छ।
सोलोमन पापमा गहिरो गरी फसे तापनि उनले आफ्नो अनुभवबाट पाठ सिके। पाप दुःखदायी कुरो हो, तर आफ्नो पापबाट पाठ नसिक्नु झनै कति दुःखदायी! परमेश्‍वरले हामीलाई हाम्रा पाप र जीवनका दुःखदायी अनुभवहरूबाट पाठ सिकाउन चाहनुहुन्छ। तपाईं पापमा फस्नुहुँदा परमेश्‍वरले तपाईंलाई भविष्यका लागि अनमोल पाठहरू सिकाउन चाहनुहुन्छ जसले गर्दा तपाईंलाई मात्र नभई अरुहरूलाई समेत मद्दत मिल्नेछ। के तपाईं परमेश्‍वरलाई त्यसरी सिकाउने मौका दिने गर्नुहुन्छ? पापमा फस्नु सोलोमनको बुद्धिमतापूर्ण काम थिएन तर उनले त्यसबाट पाठ सिक्नु भने उनको बुद्धिमतापूर्ण काम थियो। अनि उनले सिकेका अनमोल पाठहरू हामी उपदेशकको पुस्तकमा पाउँछौं।
हितोपदेश – व्यावहारिक बुद्धिको पुस्तक
यस पुस्तकका लेखक सोलोमन थिए भनेर हामीले अघिबाटै उल्लेख गरिसकेका छौं (हितोपदेश १:१। अधिकांश पुस्तक सोलोमनले लेखे तर सबै त होइन। उदाहरणको लागि हितोपदेशका आखिरी दुई अध्यायहरू सोलोमनले लेखेका होइनन् (हेर्नू: हितोपदेश ३०:१ र ३१:१)।
हितोपदेश भनेको के हो?
बाइबलमा “हितोपदेश” भनेको उखान हो। उखान भन्नाले लामो समयसम्म धेरै मानिसहरूले प्रयोग गर्ने छोटो र बुद्धिपूर्ण भनाइ भन्ने बुझिन्छ। नेपालीमा थुप्रै उखानहरू छन्। जस्तै;
“म ताक्छु मुढो, बञ्चरो ताक्छ घुँडो।” के तपाईंलाई यस्तो अनुभव भएको छ?
“कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर।” यसले एउटा मूर्खतापूर्ण कामको बयान गर्दछ।
हितोपदेशको पुस्तक छोटो-छोटो भनाइहरूको सङ्ग्रह हो। बुद्धिमानी भनाइहरूले भरिएको पुस्तक हो यो। प्रत्येक अध्यायमा थुप्रै उखानहरू छन्। प्रायः प्रत्येक पद नै एउटा उखानको रूपमा छ। यसरी तेह्रौं अध्यायमा २५ ओटा पदहरू छन् अथवा २५ ओटा उखानहरू छन्! सोलोमनले कतिओटा उखानहरू कहे (१ राजा ४:३२)? _________________। हितोपदेशको पुस्तकमा सोलोमनका थुप्रै उखानहरू छन् तरैपनि सबै ता होइन (सोलोमनले ३००० ओटा कहे तर हितोपदेशमा केवल ९१५ ओटा पदहरू मात्र छन्)। कुन कुन उखानहरू बाइबलमा समावेश गरिनुपर्छ भन्ने कुरा परमेश्‍वर जान्नुहुन्थ्यो। साथै हेर्नुहोस् उपदेशक १२:९ जहाँ उल्लेख छ, सोलोमनले “धेरै ________________ यथोचित क्रममा राखे।”
उखान एउटा छोटो भनाइ हो। त्यो कुनै सत्यतालाई व्यक्त गर्ने यस्तो तरिका हो जसले गर्दा त्यो सम्झिराख्‍न सजिलो हुन्छ। छोटो र मीठो कुरा सम्झन सजिलो हुन्छ। साथै यी हितोपदेशका शिक्षा नैतिकपू्र्ण छन्। यसको मतलब प्रत्येक हितोपदेशले ठीक र बेठीकलाई छुट्याउने काम गर्छ। हितोपदेश १५:१ लाई विचार गरौं। ठीक के हो? ____________________________। बेठीक के हो? ____________________। हितोपदेश १५:८ लाई विचार गरौं। ठीक के हो? ____________________________। बेठीक के हो? ____________________
महिनामा करीब ३० दिन हुने भएकोले प्रत्येक दिन हितोपदेशको एउटा अध्याय पढ्नुभयो भने तपाईंले पूरै पुस्तक एकै महिनामा पढेर भ्याउनुहुनेछ!
हितोपदेश एउटा छोटो भनाइ हो जसले विश्‍वासीको जीवन सञ्चालन र नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। हितोपदेशले हामीलाई जिउन सिकाउँछ: के गर्ने, के नगर्ने। हितोपदेशको पुस्तकको विषयबस्तु हो, बुद्धि। यस पुस्तकले व्यावहारिक बुद्धिको चर्चा गर्छ – जुन बुद्धि हाम्रो दिनदिनक जीवनमा उपयोगी हुन्छ। कतिपय बुद्धि अव्यावहारिक हुन्छ। शीक्षण संस्थानहरूमा सिकाइने कतिपय कुराहरू अव्यावहारिक हुन्छन्। कसैले भनेका छन्, पी०एच०डी० हासिल गर्नु भनेको झन् झन् थोरै विषयमा झन् झन् धेरै जान्नु र अन्तमा सबथोकको विषयमा केही पनि नजान्नु हो! हितोपदेशमा पाइने बुद्धि यस्तो खालको होइन। हितोपदेशको पुस्तकमा हाम्रो दिनदिनको जीवनलाई छुने निम्न खालका कुराहरू पाइन्छन्:
कसरी खुशी हुने
र थुप्रै अन्य विषयहरू
बुद्धिलाई व्यक्तिकरण गरिएको
हितोपदेशको शुरुका अध्यायहरूमा बुद्धिलाई पटक-पटक एउटा व्यक्ति (एक स्त्री व्यक्ति) को रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। बुद्धिलाई एक स्त्रीको रूपमा बयान गरिएको छ! यो कुरा हितोपदेश ९ मा देख्‍न सिकन्छ। उक्त अध्यायमा हामी दुईजना स्त्रीका बारेमा सिक्छौं। पद १३-१८ मा मूर्ख वा सांसारीक स्त्रीको बयान छ अनि पद १-५ मा बुद्धिमति स्त्रीको बयान छ। दुवै स्त्रीले पुरुषहरूलाई निम्त्याउँदै यसो भन्दैछन्, “कृपया यतातिर आउनुहोस् र तपाईंको साथी मलाई बनाउनुहोस्!” कुनचाहिँ स्त्री हाम्रो साथी भएको परमेश्‍वर चाहनुहुन्छ (हितोपदेश ८:१-१२)? _____________
कल्पना गर्नुहोस्, बाटोमा हिँड्दै गर्दा बुद्धिमति स्त्री तपाईंको साथसाथ हिँड्दैछिन्। एक्कासी तपाईंको अगाडि एउटा दोबाटो देखा पर्छ (एउटा बाटो सीधा अगाडि बढ्छ भने अर्कोचाहिँ मोडिएर गएको छ)। बुद्धि कता लाग्छिन् होली? ______________________________। तपाईं सीधा बाटो छोडेर गलत बाटोमा जान लाग्दा तपाईंको साथीले भन्नेछिन्, “माफ गर्नुहोस्, म त्यो बाटो जान सक्दिनँ अनि तपाईं पनि त्यो बाटो जानुहुन्न!” तब तपाईंले रोज्नुपर्ने हुन्छ: “म मेरा साथीसँग हिँडूँ कि तिनलाई छोडेर एक्लै अगाडि बढूँ?”
यदि तपाईं बुद्धिलाई आफ्नो साथी बनाइराख्‍नुभयो भने तपाईंले ___________ पाउनुहुनेछ (हितोपदेश ३:१८)। परमेश्‍वर भन्नुहुन्छ, त्यसलाई __________ नदे (हितोपदेश ४:१३) बरु त्यसलाई अँ_______ (हितोपदेश ४:८)!
नयाँ नियममा पल्टाउँदा बुद्धि एउटा व्यक्तिमा पूर्णरूपमा समाहित छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउँछौं अर्थात् येशू ख्रीष्टमा (कलस्सी २:२-३)! उहाँ हाम्रो बुद्धि हुनुहुन्छ! जीवनको मार्गमा हिँड्दा हामीलाई चाहिने साथी उहाँ नै हुनुहुन्छ! ख्रीष्टलाई भेट्टाउनेहरूले जीवन भेट्टाउँछन् (तुलना गर्नुहोस्, हितोपदेश ८:३५-३६ र १ यूहन्ना ५:१२)!
हितोपदेशको चाबी पद पहिलो अध्यायमा नै पाइन्छ, पद ७ मा: “परमप्रभुको _______ नै ज्ञानको ______ हो तर ______ले बुद्धि र अनुशासनलाई तुच्छ ठान्दछ।” यस्तै पद हितोपदेश अध्याय ९ मा भेट्टाउन सक्नुहुन्छ? पद: ____
यी पदहरूले दुई खालका व्यक्तिको बयान गर्छन् – परमेश्‍वरको भय मान्नेहरू र परमेश्‍वरको भय नमान्नेहरू:
कुनै पनि व्यक्ति साँचो ज्ञान र बुद्धि प्राप्त गर्न चाहन्छ भने उसले परमप्रभुको भयबाट शुरु गर्नुपर्छ। बुद्धिको घरभित्र प्रवेश दिलाउने ढोका परमप्रभुको भय हो:
यस ढोकाबाट नछिरिकन कोही पनि बुद्धिको घरभित्र प्रवेश गर्न सक्दैन! प्रभुको डर मान्न इन्कार गर्ने र उक्त ढोकाबाट भित्र पस्न नचाहनेहरूलाई मू ____ भनिएको छ (हितोपदेश १:७)। ती मूर्ख व्यक्तिहरूको बयान हितोपदेश १:२९ मा पनि पाइन्छ: “तिनीहरूले ______लाई घृणा गरेका हुनाले र परमप्रभुको ______ मान्न नचाहेका हुनाले।” के तपाईं बुद्धिको घरभित्र पस्नुभयो? के तपाईंले परमप्रभुको भयलाई रोज्नुभयो? के तपाईंले बुद्धिलाई आफ्नो साथीको रूपमा रोज्नुभएको छ?
बुद्धिको घरभित्र पसेकाहरूलाई हितोपदेशको पुस्तक दिनदिनको जीवनका लागि धेरै उपयोगी लाग्नेछ किनकि यो पुस्तक व्यावहारिक बुद्धिले भरिपूर छ। बुद्धिको घरमा नपसेकाहरूलाई हितोपदेशको पुस्तक खासै उपयोगी लाग्नेछैन। उनीहरूलाई यो थोरै अर्थ भएको सानोतीनो भनाइका एक चानचुने सङ्ग्रह मात्र हुन्छ। बुद्धि जान्न सारा बुद्धिको परमेश्‍वरलाई जान्नुपर्छ!
उपदेशक – जीवनको अर्थको खोजी
यस पुस्तकको लेखकलाई पहिलो पदमा नै बयान गरिएको छ। उक्त बयान मिल्ने एउटै मात्र व्यक्ति को हुन्? __________________
पुस्तकको नाम पहिलो पदको “उपदेशक” शब्दबाट लिइएको हो। यस पुस्तकको नामलाई विचार गर्दा हामीलाई सोलोमनको याद आउनुपर्छ जसले आफूलाई “उपदेशक” भनी जनाएका छन्। यसर्थ सोलोमन एक प्रचारक अथवा शिक्षक थिए, एउटा सभालाई सिकाउने व्यक्ति। उनी कस्ता खालका उपदेशक थिए? हामी उपदेशक १२:९ मा सिक्छौं “उपदेशक बु___________” थिए। सोलोमनको बुद्धिको चर्चा हामीले गरिसक्यौं साथै उपदेशक १२:११ मा हामी सिक्छौं उनले आफ्नो बुद्धि “एउटै ____________बाट” पाएका थिए, अर्थात् स्वयं परमेश्‍वरबाटै! परमेश्‍वर स्वयंले सोलोमनलाई यस पुस्तक लेख्‍नलाई बुद्धि दिनुभयो “अनि जे तिनले लेखे, ती ________ र ________ थिए।” यस पुस्तक प्रभुबाटको बुद्धि र सत्यताले भरिएको छ!
सोलोमनले यस पुस्तक आफ्नो जीवनको अन्ततिर लेखेका हुन्। सम्भवतः यो पुस्तक सोलोमन पापमा बेसरी फसेपछि लेखिएको हुनसक्छ। सोलोमनले धेरै पाठहरू दुःख पाएर सिकेका छन्। खुशी बन्ने कसरी होइन रहेछ भन्ने कुरा तिनले सिकेका छन्। मान्छेको हृदयलाई कुन कुराले तृप्‍त पार्न सक्छ र कुन कुराले सक्दैन भन्ने कुरा तिनले सिकेका छन्। जीवन सार्थक तुल्याउने अचम्मको रहस्य उनले सिकेका छन्। पुस्तकको विषयबस्तु यही नै हो।
सोलोमन यस्तो पुस्तक लेख्‍न एकदम योग्य थिए। राजा भएर सोलोमनले शक्ति, सम्पत्ति, स्त्री र ख्याती सबैको अनुभव गरे। यिनै कुराहरूले सुःख दिलाउँछन् भनी प्रायः मानिसहरू सोच्छन्। यी कुनै पनि कुराले हृदयलाई सन्तुष्टि दिन सक्दैन, जीवन सार्थक तुल्याउन सक्दैन भन्ने कुरा सोलोमनले व्यक्तिगत अनुभवबाट सिके।
जीवनको व्यर्थता, अर्थहीनता
पुस्तकमा पाइने एउटा चाबी शब्द हो, “व्यर्थ”। उक्त शब्द उपदेशक १:२ मा कति पटक पाइन्छ? ______। पूरै पुस्तकमा यो ३७ पटक पाइन्छ। यस शब्दको अर्थ हो, “रित्तो, कुनै मूल्य नभएको, अर्थ नभएको, कहिल्यै सन्तुष्टि दिन नसक्ने।” सबै व्यर्थ छ! जीवनको सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूलाई संक्षेपमा एउटै शब्दले बयान गर्छ: व्यर्थ! जीवनको सारा क्रियाकलापहरू (खाने, पिउने, काम, अध्ययन, जीउनु, मर्नु इत्यादि) अर्थहीन छन्! यस्तो किन? उपदेशकको तात्पर्य के हो?
पुस्तकको एउटा चाबी वाक्यांश उपदेशक १:३ मा पाइन्छ – “______मुनि।” पुस्तकभरि नै उक्त वाक्यांश दोहोरिएको पाइन्छ (करिब ३० पटक)। यस्तै अर्को वाक्यांश उपदेशक १:१३ मा पाइन्छ – “____________मुनि।” यसको अर्थ के हो? सूर्यमुनि र आकाशमुनि मानिस थुप्रै क्रियाकलापहरूमा व्यस्त छन्! मानिसहरू त्यहाँ खाइरहेका, पिइरहेका, काम गरिरहेका, खेलिरहेका, बाँचिरहेका, मरिरहेका छन्। तर यी कुनै पनि क्रियाकलापको आफैंमा न अर्थ छ न सन्तुष्टि। यदि कोही “सूर्यमाथि” र “आकाशमाथि” गएमा उसले परमेश्‍वरलाई भेट्टाउनेछ! केवल परमेश्‍वरले मात्र जीवनका कुराहरूलाई अर्थ र मूल्य दिन सक्नुहुन्छ! प्रायः मानिसहरू परमेश्‍वरलाई आफ्नो जीवनको क्रियाकलापहरूमा कुनै ठाउँ दिँदैनन् र फलस्वरूप सबै थोक व्यर्थ हुन्छन्। सोलोमन हामीलाई परमेश्‍वरबिहिन जीवन वास्तवमा कस्तो हुन्छ भनेर देखाउन चाहन्छन्। परमेश्‍वरलाई पहिलो स्थानमा नराख्दाको जीवनको व्यर्थतालाई इमानदारीका साथ हेर्नलाई हामीले आफ्ना आँखाहरू खोलेको सोलोमन चाहन्छन्, चिम्लेको होइन। तसर्थ उपदेशकको पुस्तकले परमेश्‍वरलाई ठाउँ नदिँदाको जीवनको रित्तोपना र निराशालाई प्रस्ट देखाउँछ। ख्रीष्ट (सूर्य—मलाकी ४:२, परमेश्‍वरको पुत्र) बिना उसले जेसुकै गरोस्, मान्छे सन्तुष्ट हुन सक्दैन।
परमेश्‍वरबिना जीवन अर्थहीन छ। विचार गर्नुहोस् त! मान्छे जन्मन्छ, हुर्कन्छ र एउटा दिनचर्यामा घुम्न थाल्छ। ऊ बिस्ताराबाट उठ्छ, दाँत माझ्छ, लुगा लगाउँछ, खान्छ, स्कूल वा काममा जान्छ, घर फर्कन्छ, खान्छ, सुत्‍न जान्छ अनि भोलिपल्ट उठेर फेरि सबै कुरा दोहोर्‍याउँछ, दिन प्रति दिन, एक वर्ष पछि अर्को। अन्तमा ऊ मर्छ, धूलोमा फर्कन्छ (उपदेशक ३:२०)। के लाभ छ? (“लाभ” उपदेशकको पुस्तकको अर्को चाबी शब्द हो!) यस्तो अर्थहीन दिनचर्यामा पनि कुनै अर्थ छ त?
एउटा “जिग्-स-पजल” को विचार गर्नुहोस् जसको बीचमा एउटा ठूलो टुक्रा छ जसको वरिपरि साना-साना थुप्रै टुक्राहरू छन्। बीचको ठूलो टुक्रालाई परमेश्‍वर मानौं अनि अरु टुक्राहरूलाई जीवनका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू मानौं। बीचको ठूलो टुक्राबिना अरु कुनै पनि टुक्राहरूको अर्थ हुँदैन। ती सबै अर्थहीन हुन्छन्। तर त्यो ठूलो टुक्रालाई आफ्नो ठाउँमा राख्‍नेबित्तिकै अरु सबै टुक्राहरू आ-आफ्ना ठाउँमा बस्छन् र अर्थपूर्ण बन्छन्। जीवन यस्तै हो। एउटा व्यक्तिले परमेश्‍वरलाई आफ्नो जीवनमा सबभन्दा पहिलो स्थान, केन्द्रिय स्थान, दिनेबित्तिकै जीवनका सबै क्रियाकलापहरू (खाने, पिउने, सुत्‍ने, काम गर्ने, बाँच्ने, मर्ने) एक्कासी अर्थपूर्ण बन्छन्।
परमेश्‍वरलाई केन्द्रिय स्थान दिएपछि नै एक व्यक्तिले जीवनका सम्पूर्ण थोकहरूमा परमेश्‍वरबाट मिलेको बहुमूल्य वरदानको रूपमा रमाउन सक्छौं! घरिघरि उपदेशकले भन्छन्, जीवनका थोकहरू (खाने, पिउने, काम गर्ने) परमेश्‍वरको वरदानको रूपमा रमाहट गरिने कुराहरू हुन् जो उहाँको अनुग्रही हातबाट मिलेका हुन् (हेर्नुहोस् उपदेशक २:२४; ३:१२-१३; ३:२२; ५:१८-१९; ८:१५; ९:७-९)। उपदेशको पुस्तकमा पाइने खुशीको खबर यही हो कि जीवनका सबैथोकहरूमा हामी साँच्ची नै खुशी हुन सक्छौं जब हामीले परमेश्‍वरलाई केन्द्रमा राख्छौं।
चाबी पद उपदेशक ३:११ मा छ। “उहाँले हरेक कुरालाई आफ्नो समयमा सुन्दर बनाउनुभएको छ। उहाँले मानिसका ___________मा अनन्तता पनि राखिदिनुभएको छ।” परमेश्‍वरले मानिसका हृदयमा अनन्तता राखिदिनुभएको छ। परमेश्‍वरबिना “सूर्यमुनि” भएका सबै कुराहरूले (परमेश्‍वरले दिनुभएका असल कुराहरू समेतले) परमेश्‍वर बास गर्नलाई निर्मित मानव हृदयलाई भर्न सक्दैन। मानिस जीवनमा अर्थ भेट्टाउन चाहन्छ – शुरुदेखि अन्तसम्म – तर आफ्नो सृष्टिकर्तालाई नचिनेसम्म उसले जान्न सक्दैन (हेर्नुहोस् १२:१)। परमेश्‍वरलाई चिनेर उहाँको भय मान्न थालेपछि मात्र मानिसले अर्थ, उद्देश्‍य, मूल्य, सुःख, अनन्तता सम्बन्धी प्रश्‍नहरूको चाबी पत्ता लगाउन थाल्न सक्छ।
पुस्तकको आखिरी दुई पदहरूमा आएर सोलोमनले आफ्नो अन्तिम निष्कर्ष निकाल्छन्। परमेश्‍वरबिना हामी यो निष्कर्षमा पुग्न बाध्य हुन्छौं: सबै व्यर्थ छ!! तर के सोलोमनको निष्कर्ष यही थियो त? _________। सोलोमनको निष्कर्ष बढी सकारात्कम र सन्तोषजनक छ: “_______________को भय राख र उहाँका ________________ पालन गर। किनभने मानिसले गर्नुपर्ने सारा कर्तव्य यही नै हो (उपदेशक १२:१३)।” यसरी सोलोमनको निष्कर्ष अति बुद्धिमानी र अति सरल छ! उनको तात्पर्य यो थियो: परमेश्‍वर अनि उहाँको वचनलाई तिम्रो जीवनको केन्द्रबिन्दु बनाऊ। यसो गर्नाले जीवनका सारा क्रियाकलापहरू अर्थपूर्ण हुनेछन् र तिम्रो हृदयले सन्तुष्टि प्राप्ति गर्नेछ किनकि त्यो परमेश्‍वरको उपस्थितिले भरिएको हुन्छ! सबै व्यर्थ होइन! सबै सुन्दर छ (उपदेशक ३:११)! साँच्ची नै परमेश्‍वरबाहेक अरु विकल्प छैन!
श्रेष्ठगीत – प्रेमको गीत
बाइबलको यो पुस्तकलाई सोलोमनको गीत पनि भनिन्छ कारण यो उनैको कृति हो (हेर्नुहोस् १:१)। यसलाई “गीतहरूको गीत” पनि भनिन्छ (१:१) यस अर्थले कि यो गीतहरूमा सबभन्दा राम्रो अथवा श्रेष्ठ छ। सोलोमनले कतिओटा गीत लेखे (१ राजा ४:३२)? ______________। ती सब गीतमध्येबाट परमेश्‍वरले यो गीतलाई रोज्नुभयो र आफ्नो वचनको भागमा समावेश गर्नुभयो! यो गीत श्रेष्ठगीत हो, सबभन्दा राम्रो गीत।
सोलोमनको यो गीत एक प्रेमको गीत हो। यसले एउटा पुरुष (सोलोमन) र एउटा स्त्री (शूलम्मी स्त्री) बीचको प्रेमको कथा बताउँछ। चाबी शब्द हो “प्रेमी” अनि यो ३२ पटक उल्लेख छ। उक्त शब्द भेटिने कुनै कुनै पदहरू के तपाईंले भेट्टाउन सक्नुहुन्छ? ____________________________
यस पुस्तक पढ्ने क्रममा हामीलाई यो सम्झना हुन्छ, विवाह (एउटा पुरुष र एउटा स्त्री बीचको ईश्वरीय नियममुताबिकको सम्बन्ध) एउटा पवित्र र सुन्दर कुरा हो जो परमेश्‍वरको सामु ग्रहणयोग्य छ (हिब्रू १३:४)। हामी यस्तो समयमा जिउँदैछौं जब एउटा पुरुष र एउटा स्त्रीको बीचमा ठीक खालको वैवाहिक सम्बन्ध विरलै भेट्टाउँछौं। आज धेरैले विवाहलाई तुच्छ ठान्छन्। धेरै जोडीहरू कहिल्यै विवाह नै नगरी सँगै बस्छन्; त्यसो गर्नु परमेश्‍वरको नजरमा पाप हो। अनि जो विवाह गर्छन् प्रायः त्यो पनि परमेश्‍वरको तरिकामा नभई आफ्नै तरिकामा अभ्यास गर्न खोज्छन्। सफलता हासिल गर्ने हो भने विवाहको रचनाकारलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। पारपाचुके मान्छेको तरिका हो जसले ‍समस्यामाथि समस्या निम्त्याउने काम गर्छ। एउटा पुरुष र एउटा स्त्रीको बीचमा सठीक र साँचो सम्बन्ध आज कमै पाइन्छ! ठीक खालका प्रेमका गीतहरू आज प्रायः सुन्न पाइँदैन!
सोलोमनको गीतको एउटा चाबी पद ६:३ मा पाइन्छ: “म मेरा ________को आफ्नै हुँ, र मेरा प्रेंमी ______ हुनुहुन्छ।” यी शब्दहरूले एउटा सुन्दर सम्बन्धको बयान गर्छन्: “म उहाँको हुँ र उहाँ मेरै हुनुहुन्छ।” अर्को चाबी पद ८:७ मा भेटिन्छ: “थुप्रै पानीका भलले पनि _______लाई मेट्न सक्दैन, खोलाहरूले यसलाई कदापी _____________ सक्दैनन्। कुनै मानिसले प्रेमको सट्टामा आफ्नो घरको सारा सम्पत्ति नै दिए तापनि त्यो त बिल्कुलै तिरस्कार गरिनेथियो।” अर्को शब्दमा, साँचो प्रेम मेटाउन सकिन्न, डुबाउन सकिन्न, किन्न सकिन्न! यसलाई कुनै कुराले मार्न सक्दैन! आज यसो भन्ने धेरै छन्, “म फलानोलाई प्रेम गर्छु!” तर भोलि गएर उसले त्यस कुरालाई इन्कार गर्छ। कुनै न कुनै गडबड छ त्यहाँ! त्यो साँचो प्रेम होइन! साथै साँचो प्रेम किन्न सकिन्न (“ल यो दस लाख रूपैयाँ दिन्छु अनि कृपया मलाई प्रेम गर!”)। तपाईंले पैसाको कारण कसैलाई पाउनुभयो भने त्यो त उसले तपाईंलाई होइन पैसालाई प्रेम गरेकोले हो!
पुरुष र स्त्रीबीचको सम्बन्धको बारेमा सोच्ने क्रममा हामी त्योभन्दा पनि ठूलो प्रेमको सम्बन्ध अर्थात् एकजना विश्‍वासी र उनको परमेश्‍वरबीचको सम्बन्धको बारेमा सोच्न सक्छौं। एक विश्‍वासीले धक नमानी यसो भन्न सक्छ, “म उहाँको हुँ र उहाँ मेरै हुनुहुन्छ।”
वैवाहिक सम्बन्ध एक विश्‍वासीजन र प्रभु येशू ख्रीष्टको बीचको सम्बन्धको सुन्दर चित्र होस् भन्ने परमेश्‍वरको उद्देश्य थियो (एफेसी ५:२२-३३)। के प्रभु येशूसित तपाईंको प्रेमको सम्बन्ध छ? के तपाईं अरु विश्‍वासीजनहरूसित मिलेर यसो भन्न सक्नुहुन्छ: “हामी उहाँलाई _______ गर्छौं, किनभने उहाँले पहिले हामीलाई ________ गर्नुभयो” (१ यूहन्ना ४:१९)?
परमप्रभु परमेश्‍वरमाथि आफ्नो सारा हृदयले भरोसा गर्नेहरूले यो थाहा पाउँछन् कि उनीहरू परमेश्‍वरका निम्ति आनन्दका कारण बनेका छन् र साथै परमेश्‍वर उनीहरूका निम्ति आनन्दको कारण बन्नुभएको छ!
« अय्यूब र भजनसङ्ग्रह
यशैया, यर्मिया, विलाप »